Foosto aluminium caadi ah
jiido daboolka koofiyadaha
Koofiyadaha aluminium-caag ah
Daboolka caaga ah ee Aluminium
guf dabiiciga ah
Taariikhda dhalooyinka quraaradaha ee Shiinaha
Waqtiga boostada: Meey-12-2021
Dalka Shiinaha waxaa ka jiray dhalooyin quraarado ah ilaa waqtiyadii hore. Waagii hore, aqoonyahannadu waxay rumeysnaayeen in qalabka quraaradaha uu aad u yaraa waqtiyadii hore, daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in soo saarista iyo soo saarista qalabka quraaradaha qadiimiga ah aysan dhib ahayn, laakiin ma sahlana in la ilaaliyo, sidaa darteed waa dhif in la arko ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay noocyada daboolka dhalada ee jira sida ay u kala horreeyaan？
Dhalooyin badan oo dhalooyin ah oo taageeraya furka aluminium, daboolka balaastigga aluminiumka, daboolka balaastigga ah, daboolka caagga ah ee PVC. Daboolka kaladuwan ee qaabdhismeedka iyo waxyaabaha jira waxyaabo badan ayaa ka duwan, maaddada inta badan waa aluminium, fasalka PP iyo fasalka PE. Badanaa waxaa loo isticmaalaa khamriga cad, khamriga miraha, khamriga cas. Daboolkaani waa hiddo-wadaha ...Akhri wax dheeraad ah »
Sida loogu ciyaaro ciyaaro koobabka warqadaha ah
Waqtiga boostada: Feb-21-2021
Shaqada ugu aasaasiga ah ee koobabka xaashiyadu waa qabashada iyo cabitaanka biyaha, laakiin koobabka waraaqaha sidoo kale waxay leeyihiin adeegsiyo kale. Waxaan u isticmaali karnaa koobabka warqadaha ah sameynta ciyaaro gacanta lagu sameeyo, sida cayaaraha muusikada, ciyaaraha isboortiga, ciyaaraha sayniska iyo ciyaaraha xujada. Waxay u muuqataa in awoodda koobka warqaddu runtii badan tahay! Sida ubax Goo t ...Akhri wax dheeraad ah »
Adiga oo aan ogeyn ayaad cunaysaa caag maalin kasta. Waa tan waxa uu ku sameeyo jirkaaga
Waxay ilaalisaa xasiloonida heerkulka biyaha Ha ahaato mid qabow ama mid kulul, dhalooyinka quraaradaha ayaa awood u leh inay ku hayaan heerkulkooda heer ahaaneed iyo sidaas markay sameeyaan, sidoo kale waxay hubinayaan in ay jiraan eber nuugista dhadhanka ama midabada weelka la sheegay. Biyaha Glass nadiif ah oo nadiif ah b ...Akhri wax dheeraad ah »
Dagaalkeenna ka dhanka ah adeegsiga caagagga, in badan oo naga mid ah ayaa u weecannay dhalooyinka quraaradaha. Laakiin dhalooyinka quraaradaha ah ama weelashu ma ammaan baa in la isticmaalo? Mararka qaar, dhalooyinka quraaradaha qaarkood ayaa sidoo kale aakhirka noqon kara kuwo ka waxyeello badan PET ama caag laftiisa, ayaa ka digay Ganesh Iyer, oo ah markabkii ugu horreeyay ee ay somalia yeelato ee somalia ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay sababta daboolkeena aluminium uu caan u yahay
Waxyaabaha ugu sarreeya ee caanka ah waa kuwo aan laga sooci karin tayada iyo quruxda badeecada lafteeda. Koofiyadeena aluminium waxay ka samaysan yihiin alaab ceyriin oo tayo sare leh. Ka dib baaritaanka mashiinka, kuwa ugu dambeeya ee soo haray waa alaab ceyriin aad uwanaagsan Kadibna u isticmaal tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan si aad uhesho una soo saarto ...Akhri wax dheeraad ah »